ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, တူရကီလမ်းဆုံ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, တူရကီလမ်းဆုံ
31 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တူရကီတစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ 21 ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်စတင်ရန်အင်္ဂလန်မှတိုးချဲ့အဖြစ်တရုတ်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုနယ်ပယ်။9ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြီးစီးခဲ့သောကြောင့်ကုန်စည်2ဒေါ်လာဘီလျံ၏စီးဆင်းမှု၏အခြေစိုက်စခန်းရှိလိမ့်မည်။ Canakkale တံတား၏အရေးအပါဆုံးမှတ်တိုင်
အာရှနှင့်ဥရောပအကြားခေတ်သစ်တူရကီမှာတည်ရှိပါတယ်ပိုးလမ်းမကြီးလမ်းဆုံအားကောင်းလာစေပြီးရန်ကြိုးစားခဲ့,2ထရီလီယံဒေါ်လာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစီးပွားကူးသန်း၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုအရှိန်မြှင့်။ ဤအခြေအနေတွင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan "219ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ၏စီစဉ်ထားဆောက်လုပ်ရေးပြန်တမ်းခဲ့သည်။ Konya နှင့် Mersin လည်းသူတို့ရဲ့Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 8 တင်ဒါတှငျကြှနျုပျတို့စီမံကိန်းများနှင့်မြေယာသိမ်းဆည်းအလုပ်ဆက်လက်နေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ဝန်ကြီး Turhan, "တစျခုမှာခါးပတ်တစ်ခုမှာလမ်းမစီမံကိန်း" လေ့လာချက်များ၏ကြာချိန်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ပြသူသည်နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ အာရှနှင့်ဥရောပ, မြောက်ဘက်အရှေ့အနောက်လမ်းကြောင်းများအကြား, Turhan တောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းစင်္ကြံအပါအဝင်သုံးအဓိကစင်္ကြံရှိကြောင်းထောက်ပြသည် "ဟုအဆိုပါစင်တာကိုဘယ်အတန်းမှာခေါ်လိုင်းတရုတ်ထံမှ စတင်. , ဗဟိုအာရှနှင့်ကက်စပီယန်ဒေသနိုင်ငံများမှတစ်ဆင့်ဥရောပကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်, သမိုင်း အဆိုပါပိုးလမ်းမကြီးတစ်ဆက်အဖြစ်အကြီးအအရေးပါမှုရှိပါတယ်။ ဗဟိုစင်္ကိုလည်းတရုတ်ထံမှ စတင်. အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ကာဇက်စတန်ကနေတစ်ဆင့်တူရကီရောက်ရှိဖို့ဥရောပရှိချိတ်ဆက်နေသည်။ ဥရောပနှင့်အာရှဒီ table ထဲမှာအရေးပါမှုတရုတ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများအတွက်အဓိကပဏာမခြေလှမ်းစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်အသစ်တစ်ခုကိုစူပါပါဝါဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းသမိုင်း Silk Road လမ်းကြောင်း, ဆက်သွယ်နေကြသည်ပြန်ပါပြီ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
နေ့စဉ် TRADING2ဒေါ်လာဘီလီယံ
Turhan "တရုတ်ထံမှလန်ဒန်တစ်ချောမွေ့စွာသယ်ယူပို့ဆောင်လိုင်းပေးပုံဟာတရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဗဟိုအာရှကနေကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရောက်ရှိသမျှသောနည်းလမ်းများ၏ပေါင်းစပ်ပြီးမှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒတူရကီရဲ့အခြေခံအကျဆုံးပုဆိန် ဤအချက်မှာအလွန်အရေးပါအဖြစ်အခြေခံအဆောက်အအုံ။ ဤစီမံကိန်း3နိုင်ငံများတွင်ပေါင်းစပ်သာ။ ဗြိတိန်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဂျာမနီ, သြစတြီးယား, ဟန်ဂေရီ, ဆားဘီးယား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဂျော်ဂျီယာမှတူရကီ, အဇာဘိုင်ဂျန်, ကာဇက်စတန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန် '' ပြီးတော့သူကတရုတ်ကိုဆက်သွယ်။ ဘာကူကနေမီးရထားလမ်း၏ Kars 829 ကီလိုမီတာမှတိုးချဲ့ပါကအလယ်ပိုင်းစင်္ကြံလိုင်းကိုဖို့ကက်စပီယန်ပင်လယ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြီးဆုံး။ သို့သော်ဤစီမံကိန်းများ၏အရေးပါမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ့်နှစ်တွေမှာနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ တရုတ်နှင့်ဥရောပအကြားကုန်သွယ်ရေးသောကြောင့်ယနေ့တစ်ရက်အထွဋ် 1.5 ဒေါ်လာဘီလျံကိုရှာဖွေရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီအတိုးစီးနှင့်တစ်နှစ်အတွက်တစ်နေ့လျှင် $56-2 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်ရန်မျှော်လင့်နေသည်ကုန်သွယ်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်းအပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာ run ဖို့; လိုင်း Turhan အရေးပါသောအအခြားတစ်ဖက် Marmaray ရထား Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, Yavuz Sultan Selim တံတား, မြောက်အမေရိက Marmara ကားလမ်းနှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, Osmangazi တံတား, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း, Gebze Orhangazi ၏မြောက် Aegean ဆိပ်ကမ်းကိုပေါ်, ထို့ကြောင့် "ဖြည့်စွတ်နှင့်အတူလမ်းပြီးသွားသူကပြောပါတယ် Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, တံတား 1915 Canakkale, ထိုကဲ့သို့သောကျနော်တို့များကိုအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဤစင်္ကြံ၏အရေးပါမှုကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်အကြီးစားစီမံကိန်းများကိုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Anatolia သည်ကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်, ဗဟိုအာရှနှင့် Turhan ဤအခြေအနေတွင် 219ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ၏စီစဉ်ထားဆောက်လုပ်ရေးပြန်တမ်းခဲ့ပါတယ် "သူတို့ကတရုတ်ထံမှအနာဂတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝယ်လိုအားတုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံတည်ဆောက်ရန်စတင်ကပြောကြားသည်။ Konya နှင့် Mersin လည်းသူတို့ရဲ့Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 8 ဝယ်ယူရေးစီမံကိန်းနှင့်ကျွန်တော် expropriation ၏လုပျငနျးဆက်လက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ကုန်စည် East-West နှင့်မြောက်အဘိဓါန် South စီးဆင်းမှုရဲ့လမ်းဆုံမှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပိုလျှံအတွက်2ထရီလီယံဒေါ်လာအလားအလာထိရောက်သော Logistic အခြေစိုက်စခန်းစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ Marmara, Aegean လိမ့်မည် Bond
တူရကီanlamlandırılarakxnumx'üncတစ်နှစ်နှင့်အတူ HR ခြေလျင်အကွာအဝေး, Canakkale 100 2023 မီတာသမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ဖွစျလိမျ့မညျတံတား၏ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်အဘို့အဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တံတား၏ဥရောပခြေထောက်ပေါ်အခန်းများပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ မျှော်စင်တပ်ဆင်၏အာရှဘက်မှာအခန်းများမေလတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းပြီးနောက် 1915 စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားမတ်လ 21 1915 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး 18 Dardanelles တံတားဖွင့်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Icon ရဲ့ BRIDGE
1915 Dardanelles တံတား; ပြီးစီးသည့်အခါအဆိုပါ223 တထောင်-ခြေလျင် Mid-span, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Mid-span ရပ်ဆိုင်းမှုတံတား၏ခေါင်းစဉ်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဘက်အဖွင့်နှင့်အတူတံတား, 770 မီတာအရှည်3563 တထောင်မီတာစုစုပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ 365 တံတားများနှင့် viaducts ၏စုစုပေါင်းကျမ်းပိုဒ်အရှည်ပေးခံရ 680 4.608 မီတာမီတာချဉ်းကပ်မှု,23 အသွားအလာသောင်တင်လိမ့်မည် x ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တံတားကုန်းပတ်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်မီတာ width နဲ့ height အတွက် 45.06 3,5 မီတာနှင့်လမ်းခရီးလမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ရည်ရွယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျှော်စင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်အကြောင်းကို 40 မီတာသံမဏိမျှော်စင်မြင့်၏အနက်မှာပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးပါလိမ့်မည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 318 မီတာရှိလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းလက်အောက်တွင် 1 ရပ်ဆိုင်းမှုတံတား,2ချဉ်းကပ် viaduct,4ကွန်ကရစ် viaduct,6ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတား, 38 မြေပေါ်,5တံတား, 43 ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏ 115 culverts, 12 လမ်းဆုံ4ကားလမ်းဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦများနှင့်အခြား features တွေ, သည် "icon များ၏တံတားဖြစ်လိမ့်မည်" ။ (လာနံနက်ခင်းပါ)
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးတိုင်းပြည် 30 / 11 / 2018 ဝန်ကြီး Mehmet Cahit အာဖဂန်နစ္စတန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, ထိုကက်စပီယန်ပင်လယ်, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာနှင့်တူရကီရဲ့စီးပွားရေး Turhan "Lapis Lazuli စင်္ကြံ, ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလင့်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာရည်မှန်းအလွန်အရေးကြီးသောပဏာမ။ ကက်စပီယန် "ဗဟိုစင်္" နှင့် Lapis Lazuli လမ်းကြောင်းအာရှနှင့်ဥရောပချိတ်ဆက်နှစ်ခုအရေးကြီးသောစင်္ကြံ။ အဆိုပါပါတီများ၏ "Transit နှင့်ပို့ဆောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၏ဝန်ကြီးများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးညီလာခံဖို့ 28 နိုဝင်ဘာလ 2018 အပေါ် Turkmenbashi ကျင်းပခဲ့သည်။ "အာရှဥရောပကုန်သွယ်မှု 1.5 ဒေါ်လာဘီလျံတစ်ရက်အကြားပြု," တူရကီအဖွင့် session တစ်ခု, အာရှနှင့်ဥရောပတိုက်ကြီးမှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲတွင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ကိုယ်စားညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သည် ...
အစ္စတန်ဘူလ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမယ့်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်မယ့် 24 / 10 / 2015 အစ္စတန်ဘူလ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမယ့်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်မယ့်: Izmir, ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမတစ်ဦးမဟာဗျူဟာမြောက်အခြေစိုက်စခန်းရှိလိမ့်မည်။ Izmir-တူရကီ YHT ဟာဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်းကိုချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ Izmir တစ်ကုန်များဆက်လက်လွှဲပြောင်းတင်ပို့စင်တာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ "အဘယ်သူမျှမကိုင်လို့မရပါဘူး Izmir," အေကေပါတီİzmirလက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းYıldırım, မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ Izmir ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအတွက် ပို. ပို. အစွမ်းထက်ကြီးထွားလာနေသည်ဟုဆိုသည်။ Izmir ယခု၎င်း၏အရေးပါပုံကိုနှင့်မဟာဗျူဟာအခြေစိုက်စခန်းခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ၏ဗဟိုအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်, တဖန်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကက်စပီယန်မဟာဗျူဟာ Izmir အတွက်မနေ့ကကျင်းပခဲ့သောညီလာခံအားဖြင့်အင်စတီကျု (HASEN), တူရကီနှင့် Izmir ဤဒေသရှိ၎င်းတို့၏ယခင်ဘုန်းအသရေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ လျင်မြန်စွာကမ္ဘာကြီးကုန်သွယ်ရေးစင်တာ ...
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, တူရကီ, ဗဟိုဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူ 03 / 11 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan နိုဝင်ဘာလ Raillif မဂ္ဂဇင်း၏နံပါတ်တင်သွင်းအမည်ရဆောင်းပါး "တူရကီနှင့်အတူခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, ဗဟိုဖြစ်ပျက်" ။ LETTER လည်း "ဗဟိုစင်္" ဟုခေါ် Arslan တူရကီတို့ကဝန်ကြီး "ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း", အရှေ့နဲ့အနောက်အကြားရှိရင်းစွဲလိုင်းများတစ်ဦးဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းကြောင်းဖြစ်စေ၏။ ဤအချက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒ၏ဝင်ရိုး၏အခြေခံတွင်, တရုတ်ထံမှလန်ဒန်မပြတ်မတောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများကိုတစ်အကြီးစားအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုထုတ်တင်ဆောင်လာသောတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ အရှေ့ဖျားဒေသကနေဥရောပအထိ, သမိုင်းရာစုနှစ်များစွာများအတွက်ယာဉ်တန်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း, ဗဟိုစင်္အတွက်ပိုးလမ်းမကြီးအဖြစ်နေရာမှယူထားပြီး ...
တူရကီနှင့် IRU ညီလာခံခေတ်သစ်ပိုးလမ်းအပေါ်လုပ်ရမည် 03 / 12 / 2012 Kavacıkကျောင်းပရဝုဏ်ညီလာခံခန်းမ "တူရကီနှင့်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်း" ၌4မှာပထမဦးဆုံးကျောင်း, Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်းကျောင်းသားများကို Irun လက်မှတ်များချီးမြှင့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ကြောင်း, Irun ဒေသနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာ Haydar Ozkan 2012 ဒီဇင်ဘာလ 14.00 ၏အင်္ဂါနေ့ အဆိုပါကွန်ဖရပြီးနောက်လက်မှတ်အခမ်းအနားကျင်းပသည်လိမ့်မည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှကိုယ်စားလှယ်များလည်းငါတို့စာနယ်ဇင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားခံရသောအဖွဲ့ဝင်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်ကြိုဆိုပါတယ်ဖို့အခမ်းအနားတွင်ကြားပျော်ရွှင်မှုကိုအကြောင်းကြား, ငါတို့သည်သင်တို့ကောင်းသောအလုပ်ကိုအလိုရှိ၏။ ရိုးသားစွာ Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်းကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးယူနစ်ပွဲပြန်ကြားရေး: Kavacik Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်းကျောင်းပရဝုဏ်ညီလာခံခန်းမ Vatan Cd ။ အမှတ် 69 Kavacik-Beykoz / အစ္စတန်ဘူလ်ပါဝင်သူ: Heydar ...
တူရကီခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Be မူမည် 09 / 07 / 2019 တူရကီခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာလိမ့်မည်: တူရကီ, ဖုံးလွှမ်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး 21 စင်တာတည်ထောင်ခြင်း, အင်္ဂလန်မှတရုတ်ထံမှဆန့်။ ကိုးပြီးစီးခဲ့စင်တာများကုန်ပစ္စည်းများ၏နေ့စဉ်2ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအခြေခံလိမ့်မယ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏ကြိုးပမ်းပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်အာရှနှင့်ဥရောပတူရကီမှာတည်ရှိပါတယ် crossroads "စီးဆင်း,2ထရီလီယံဒေါ်လာသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစီးပွားကူးသန်း၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်အရှိန်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan "ဤအခြေအနေတွင်အတွက်စီစဉ်ထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာကိုး၏ဆောက်လုပ်ရေး 21 ပြန်တမ်းခဲ့သည်။ Konya နှင့် Mersin လည်းသူတို့ရဲ့Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ နု၏ရှစ်, စီမံကိန်း ...
မြောက်အမေရိက Aegean ဆိပ်ကမ်း
မြောက်ပိုင်း Marmara ကားလမ်း
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, တူရကီ, ဗဟိုဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူ
တူရကီနှင့် IRU ညီလာခံခေတ်သစ်ပိုးလမ်းအပေါ်လုပ်ရမည်
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ Express ကိုရထားပြန်လည်